प्रभाषसँग “प्रभास २.०” मा काम गर्दै भाग्यश्री - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
प्रभाषसँग “प्रभास २.०” मा काम गर्दै भाग्यश्री
चलचित्र ‘मैने प्यार किया’बाट बलिउडमा प्रवेश गरेकी नायिका भाग्यश्री यसपछि भने पर्दाबाट हराइन् । उनी, आफ्नै घरयासी जीवनमा नै बढी व्यस्त देखिएकी थिइन् ।
तर, अब भने उनले ठूलो पर्दामा कमव्याकको तयारी गरेकी छिन् । एक भारतीय मिडियासँग कुरा गर्दै भाग्यश्रीले २ वटा कथा पढिरहेको बताएकी छिन् । उनले भनेकी छिन्–‘हो, म यतिबेला २ वटा कथा पढिरहेकी छु । एउटा चलचित्र नायक प्रभाषसँग छ ।’
Priceless! Not the diamonds but the head that holds them! #diamonds #jewelry #photoshoot #necklace #priceless #shine #beyou #beautiful #bethewomanyouwanttobe #womanofsubstance @roopavohrafinejewellery @pinkiemakhijani
A post shared by Bhagyashree (@bhagyashree.online) on Jan 23, 2020 at 4:28am PST
उनले, चलचित्रको बिषयमा कुनै पनि जानकारी अहिले नै दिन नमिल्ने पनि बताएकी छिन् । तर, लक डाउन खुले लगतै एक चलचित्रको छायांकन सुरु हुने उनको तर्क छ । उक्त्त चलचित्रमा प्रवास बाबु र छोराको रोलमा देखिने छन् । बाबु छोरामा आधारित कथा भएको र दुबै रोलमा प्रवास रहने हुनाले चलचित्रको नाम नै प्रभास २.० राखिएको बताइएको छ ।
भाग्यश्रीका अनुसार, उनका २ सन्तानले नै उनलाई चलचित्रमा फर्किनका लागि सुझाव दिएका थिए । भाग्यश्रीका छोरा अभिमन्यू देसाइले अभिनय गरेको चलचित्र ‘मर्दको दर्द नही होता’ टोरन्टो फिल्म फेस्टिभलमा प्रदर्शन भएको थियो ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: बिहीबार, जेठ १ २०७७ १४:१४:१०
कुनै सल्लाह, सुझाव वा प्रतिकृयाको लागि ktmdainikof[email protected] मा इमेल पठाउन सक्नुहुन्छ ।